सिफारिस Archives - Tudikhel - Nepal's Popular Digital NewsPaper
लघु कथा “ प्रफुल्ल मन“
सुन्त्न मात्र के लागेको थिए राधाले सम्झाइ हालिन खोइ मेरो हार किनि दिने भनेको हैन ? मेरो हार किनिदिने कुरा पनि“ स्यालकै कथा भयो हैन ? राधाले प्रतिप्रश्न गरिन आ नकराउ ह,ै म थाकेको छु भनेर कोल्टो फेरे मैले , राधा फतफताउदै थिइन अब त हजुरले लाने पार्टी , भोजहरुमा म ता काहीँ पनि जान्न बुझ्नु भयो सबै साथिहरुको हार न्याक्लेस छ आफ्नु चाहिँ नाक कान बुचो । त्यो टायलघरे निसाले पनि हार किनि सकिन् अब त मै मात्र...
[लघुकथा : जाती ज्वाइँ !
काईली आमैले खुसुक्क हर्केको कानमा भनिन," मेरो जेठो छोरो काम नलाग्ने भयो बाबू हर्के ! स्वास्निको मुतमा बग्यो, छुट्ट भिन्न भयो, असती। भाईले नकमाउन्जेल पर्खी त्यसपछी छुट्टेलास भनेको मानेन बुहारीले कर्कश गरी " तिम्रो कान्छो छोरो घुमेर खान्छ । स्नातक सकेको मान्छे जागिर खोज्न र कमाउन नपर्ने ,खाली दाईको थाप्लोमा गिर खेल्न पल्किएको छ । हामी छुट्टिएपछि तह लाग्छ ।" " खोइ काईली आमै हामीले त के भन्ने हो र...
ऋतुहरुको अनन्त चक्रले परिवेशलाई मडाड्र्दै, बटार्दै, हुँडुल्दै र गाँज्दै लगीरहन्छ । मान्छेहरु भन्दछन् आज यो बार हो, यो गत्ते, यो महिना र यो साल आयो वा गयो । न कसैले रोक्दा राकिने, न त छेक्दा अढिन्ने, कति निष्ठुरी छ यो ऋतुहरुको आउने जानेक्रम ? मुकुन्देले थाहा पाएदेखि ऋतु अनुसार कति चाँप, सुनाखरी, लालीगुराँस,चम्पाचमेली र सयपत्रिहरु फुले, अनि मखमली पनि । रुखका पातहरु कति झरे, पौलो फेरे ।...
सुष्माको लाहुरेनी फुल सार्वजनिक
काठमाण्डौ । सुष्मा रुपाबुङ राईको उपन्यास लाहुरेनी फुल सार्वजनिक गरिएको छ । काठमाण्डौको अनामनगर स्थित मण्डला थिएटरमा उपन्यासको सार्वजनिक गरिएको हो । चर्चित कवि श्रवण मुकारुङ, कवि एवम पत्रकार प्रकाश गुरागाइ, अभिनेत्री सिर्जना सुब्बा र उपन्यासकार लेखक राईले सयुत्त रुपमा विमोचन गरेका थिए । साथै चारै जनाले उपन्यासमाथी बोलेका थिए । कवि श्रवण मुकारुङ उपन्यासमा धेरै सरल शब्दहरुको संयोजन रहेकाले मन ता...
सुजन सेलिङका उत्कृष्ट पाँच कविता
अन्त्यमा जिन्दगी फूल फुल्यो ओइलिनु थियो, ओइलियो त के भयो ? घाम झुल्क्यो अस्ताउनु थियो, अस्तायो त के भो ? भो पर्दैन चिच्याउनु एकैछिन प्र्खिदेउ भनेर । भो पर्दैन अत्तालिनु एकैछिन हाँसिदेउ भनेर । आयु पुग्यो झ¥यो डाँडाबाट जिन्दगी त भेलभित्र डुब्नु, उत्रनु, डुब्नु, उत्रनु बस्, अन्तमा जिन्दगी फलको कथा बन्यो, घामको लालीसँग उदायो अनि साँझको गोधूलिसँसगै अस्तायो । इङ्वा सेसेलुङजस्...
बेलायतदेखि उपन्यास लिएर आइन शान्ति
ललितपुर ः एक दशकदेखि बेलायत रहँदै आएकी शान्ति लिम्बू उपन्यास ‘मिलीजुली’ लिएर आएकी छिन् । ललितपुरस्थित किरात याक्थुङ चुम्लुङको कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका पूर्वकुलपति वैरागी काइँला र वरिष्ठ साहित्यकार तथा समालोचक गोविन्दराज भट्टराईले उपन्यासको विमोचन गरेका हुन् । विमोचनपछि बोल्दै पूर्वकुलपति काइँलाले नेपाली साहित्य लेखनमा लिम्बू मातृभाषी महिला लेखकको प्र्रवेशले मह...
सन्देशको ‘आगोको सौन्दर्य’ विमोचन
फिदिम । सञ्चारकर्मी तथा साहित्यकार सन्देश सुब्बा द्धारा लिखित ‘आगोको सौन्दर्य’ कविता संग्रह मंगलबार विमोचन गरीएको छ । साहित्य साधना पाँचथर, रेडपाण्डा प्रकाशन तथा पाँचथर गजलमञ्चको संयुक्त आयोजनामा सम्पन्न सो कार्यक्रममा साहित्यकार विरेन्द्र ‘प्रतिक’ तुम्बापोले सो कृतिको विमोचन गरेका हुन् । पाँचथरको फिदिममा आयोजना गरीएकोे कार्यक्रममा सो कविता संग्रह सार्वजनिक गरेको हो । १९ वटा कविता समेटिएको सो सं...
सुजन सेलिङको कविता संग्रह सार्वजनिक
पाँचथर । कवि सुजन सेलिङको कविता संग्रह 'यद्धले भूलेको बाँकी युद्ध' शनिबार फिदिममा सार्वजनिक गरिएको छ । याक्थुङ प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति राजेन्द्रकुमार जबेगूले सार्वजनिक गरेका हुन । विमोचनपछि पुस्तकमाथि अन्तरक्रिया तथा संग्रहमा समेटिएका एक दर्जन बढी कविता वाचन पनि सपन्न भयो । विमोचन कार्यक्रममा लेखक जीके पोखरेलले विशेष मन्तव्य राखेका थिए । उनीले पूस्तकमा स्थानीय र लिम्बू भाषाका मिथकहरुको राम्र...